10 Jul, 2020 - 00:07	 2020-07-09T19:32:28+00:00 2020-07-10T00:03:06+00:00 0 Views
MAKADII veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 21 okuberekwa nemwana 1, ndinotsvakawo murume ane makore 25 kusvika 30. Ndiri HIV negative, ndoda ari pachokwadi nemba. Anonamata andida ndibate pa0786 301 804.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndinoshanda uye ndinotsvagawo musikana ane makore 21 – 26. Nhare yangu 0776 370 347.
Ndotenda nechirongwa chino Kwayedza, ndiri mukomana ane makore 27 uye ndotsvagawo mukadzi ane makore 20 – 25. Andifarirawo nhamba dzangu 0786 984 671.
Makadini veKwayedza? Ndotsvakawo mukadzi wekupinda naye muwanano ane makore 21 kusvika 26 asiri pamushonga nokuti ini handipo. Nhare yangu 0783 160 389.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, ndotsvaga musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 20. Ndoda asiri pamushonga ari pachokwadi. Andida anondibata pa0716 121 662, ndine masms chete.
Ndiri mukomana ane makore 30 ekuberekwa ndiri kutsvagawo musikana ane makore 24 kusvika 28 akanaka zvake. Nhamba idzo 0734 964 357.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 47, ndinotsvagawo mukadzi wekuwadzana naye anonamata. Nhamba dzangu 0775 567 470.
Makadii veKwayedza? Ndine mwana 1 nemakore 26, ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 25 zvichidzika. Nhare yangu 0782 479 895.
Makadiniko vepaTishamwaridzane? Ini ndiri mudzimai ane makore 40 nemwana mumwe. Ndinotsvaga murume ari pachokwadi anoda zvewanano anogara kuMasvingo. Ngaave anotya Mwari asiri pamushonga ane makore 43 kusvika 47. Andifarira ngaandibate panhare yangu 0713 999 067.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume anofara kwazvo wemakore 37. Ndinoda shamwarikadzi anofarawo seni, anoda kufara neni mumazirudo azere mafaro ega ega, tigofara tose tichingofara. Ngaave akarurama chiso nechimiro ari tsvarakadenga asina zvipomerwa chose. Shamwarikadzi wangu ndiripo pa0712 774 011.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane Makore 36. Ndinotsvagawo musikana ave kudawo zvekuwanikwa ari pachokwadi uye akanaka. Nhare yangu 0714 166 197.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 40 ndisanganisei nemurume ane makore ari pamusoro peangu asingadhakwi. Senda sms kana kufona pa+27 631 543 138.
Makadii? Ndotsvagawo mukadzi ane makore 28 – 35, ini ndine 46 uye ndiri negative. Nhare yangu 0782 980 649.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 52, ndodawo mudzimai ane makore 36 kusvika 40. Anoda zvekuvaka, asiri pachirongwa ndobatika pa0735 702 428.
Makadini henyu veTishamwaridzane? Ini ndiri mukadzi ane makore 25 nemwana 1 nenhumbu ine 4 months. Ndiri pamushonga, hapana zvandinoita muupenyu. Ndiri kutsvakawo murume ane makore 32 zvichidzika ari pamushonga seni uye anoshanda. Ndinogara kuBindura, vanoda zvekutamba kwete nekuti ndanzwa nekunyeperwa. Andifarira anondibata pa0712 485 857.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 38, ndine vana vaviri uye ndotsvagawo murume ane makore 45 zvichikwira. Ndoda akafirwa uye ari pamushonga, andifarira ngaandibate pa0714 522 428.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 24, ndotsvakawo musikana wokuroora anoda zvemba uye ari pachokwadi. Ngaave nemakore 18 – 22. Andida anondibata pa0776 088 941.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndinotsvagawo shamwarikadzi ine makore 30 – 38, kunyanya inogara kwaMutoko. Anoda ngatitaure pa0716 656 659.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 48 nevana vatatu, ndiri pamushonga uye ndotsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 50-60. Ngaave achishanda uye asingaratidzike kuti ari pamushonga. Matsotsi kwete, andifarira ngaandibate pa0786 499 958.
Makadii? Ndiri mudzimai ane vana 2, ndiri muHarare uye ndotsvagawo murume anoda kuroora akashambidzika anoyemurika ane makore 40 – 48. Nhamba dzangu 0786 013 767.
Makadini vechirongwa? Ndiri mukomana mupfupi asi ndakanaka, makore ndine 29. Ndiri kutsvagawo musikana akanakawo ave kuda zveimba ari pachokwadi, ini ndanzwa nekurasiswa. Ngaave ane makore 24 zvichidzika, ndinomuvimbisa kumupa rudo nerukudzo. Ndiri muHarare, nhamba dzangu idzi 0712 583 560.
Makadii? Ndiri murume ane makore 44, HIV+ uye ndinoda mudzimai ari pachokwadi. Runhare rwangu 0716 650 568.
Ndiri mudzimai ane makore 36, ndinotsvakawo murume wekushamwaridzana naye. Ndiri mucross-border. Andifarira ngaandibate pa0771 600 085.
Makadii? Ndiri murume ane makore 29 nemwana ndodawo mukadzi ane makore 18 kusvika 20 akanaka uye anogeza. Ndoshanda, vanoda ndibatei pa0782 383 068.
Ndiri mudzimai ane makore 40, ndinoda murume anoda zvekuroora kwete kutamba. Ndiri HIV positive, nhare yangu 0771 982 977.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Ndine makore 21, nhamba dzangu 0783 425 759.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25, ndotsvaga musikana wekuwadzana naye ane makore 18 anogara muHarare. Anoda ngaandibate pa0777 279 941.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndoshanda muHarare uye ndinotsvagawo musikana akanaka anogeza. Ngaave mudhuze meHarare, ndodawo ane rudo ane makore kubva 18 kusvika 29. Ndingafara mukandishambadzawo, nhare yangu 0784 744 730.
Ndinotsvagawo mudzimai wekufambidzana naye ane mwana kana asina ane makore 28–34. Ndine makore 46, HIV negative. Ngaave anobva Chimanimani, Nyanga neMutare. Ndine vana vatatu, nhare yangu 0771 228 059.
Ndiri murume ane makore 40 makore, ndotsvagawo mukadzi mukobvu ane rudo asina chirwere. lni handishande parizvino. Andifarira ndibate pa0773 278 946.
Makadini veKwayedza? Ndanzwa nekunyorera shambadzo yangu haisi kubuda. Ndiri mukomana ane makore 26 ndinodawo musikana chero ane mwana wake akanaka chiso nemwoyo uye anotya Mwari. Ndiri kuda wakufambidzana naye anondipa rudo rwemachokwadi ane makore 18 kusvika 27 asi vakadzi vevanhu kwete. Andifarira andida nhare yangu 0776 242 073 iripo paWhatsApp, ngaave anogara muHarare.
Ndiri musikana ane makore 23, ndoda mukomana ane makore 23-26. Mondibata pa0712 397 054.